Saturday November 07, 2020 - 13:28:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Rabbi ha unaxariistee waxaa wadanka Suudaan ku geeriyooday qaar'igii caanka ahaa ee Nuureyn Max'med Sidiiq iyo sedax kamid ahaa xufaadda Qur'aanka ee wadankaasi.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa xaqiijisay in shil gaari oo shalay ka dhacay meel 15Km ujirta magaalada Umu Durmaan uu sabab unoqday geerida Sheekha iyo sedax kamid ahaa dadkii la socday oo qudhoodu ahaa xufado.
Sheekh Nuureyn Mux'med ayaa caan ka ahaa bariga Afrika iyo caalamka Islaamka intiisa kale waxaana lagu yaqiinnay Qur'aanka Kariimka oo uu u akhriyo si tartiil ah.
Mas'uul katirsan wasaaradda Awqaafta xukuumadda dabadhilifka Suudaan ayaa xaqiijiyay geerida Sheekha iyo sedax kamid ah Xufadada Qur'aanka oo gaariga la saarnaa Sheekh Nuureyn waxayna kala ahaayeen Cali Yacquub,Cabdalla Ciwad Al Kariim iyo Muhannad Alkinaani.
Alle ha unaxariistee Sheekh Nuureyn ayaa xifdinta Qur'aanka Kariimka billaabay sagaashameeyadii isagoo ku sugan waqooyiga gobolka Kordufaan, Riwaayado kala duwan ayuu Qur'aanka ku akhrin jirin wuxuuna taranno Qur'aan uga qeyb galay illaa 83 dal oo daafaha caalamka ah.
Cajalladaha uu duubay sheekha ayaa ku faafsan daafaha caalamka Qiraa'adiisuna waa mid khushuuc ku beeraysa quluubta dadka mu'miniinta ah.